Shiinaha ayaa hoos u dhigaya soo-saaraha gogosha vinylalkohol-ka ah iyo alaab-qeybiye | Karlter
Shayga: Vinyl Plank taxane dhabarka qallalan，ku dheji dabaqa dusha sare ee alwaaxa looxa PVC ee ka hortagga biyuhu
Qalabka 1.Raw waa 100% u habboon deegaanka.
2. Sibidhka, Anti-carrada, anti-abrasion-ka anti-bakteeriyada.
3.Xabad iyo Raaxo.
4.Fudud in la nadiifiyo
5.100% Biyo-ma-jiraan iyo huuri-caddeyn.
7 Nuugista Cod iyo Yaraynta Jabaqda.
8.High-Elasticity, Badbaadada Sare.
9.Iasy si loo rakibo
Qiimaha dayactirka hooseeya, oo aan loo baahnayn wax-wax.
Midabyo kala duwan ayaa la siiyaa si ay ugu dhigmaan xaalado kala duwan.
Magaca Gogosha Vinyl (LVT dabaqyada qallalan ee qallalan)
Dhumucda guddiga 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 5.0mm ama loo habeeyay
Xidho dhumucda lakabka 0.07mm, 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm sida caadiga ah
Maqaarka dusha sare Qoto dheer xardhan, Iftiin qafiif ah, Crystal, Shaashad gacan lagu duubay.
Rakibaadda Hoosta ku dheji
(Ama Loo habeeyay) 6 "* 36" 152 * 914.4
Waa maxay xabagta hoos LVT?
Ku dheji Faleelooyinka Vinyl-ka ee raaxada ah waxay u egtahay inay leedahay naqshad yar oo khafiif ah. Waxay u baahan tahay in hoos loo dhajiyo inta lagu guda jiro rakibida si loo helo dabaq xasilloon oo waara. Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso sagxadda hoose ee aad ku rakibayso, waa mid fidsan oo xitaa. Haddii ay jiraan wax cillad ah hoosta hoose, waxay ka muuqan doontaa dabaqaaga cusub ee LVT. Sidoo kale, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in sagxadda hoose aysan u nuglayn qoyaan ka hor intaadan ku dhejin foornooyinka dusha hoose.
Maaddaama sharooto kasta ay u baahan tahay in hoos loo dhejiyo, waxay qaadan kartaa waqti dheer in lagu rakibo noocan ah vinyl-ka raaxada. Sidoo kale way adkaan kartaa inaad adigu sameyso, iyada oo milkiileyaal badan oo doorta inay kireystaan ​​xirfadle ku habboon iyaga.
Faa'iidooyinka muhiimka ah ee Glue down LVT waxaa ka mid ah
• Ka raqiisan gujinta isdhexgal LVT
• Xasiloonida oo kordhay
• In yar ayey u dhowdahay inay saameyn ku yeelato isbeddelada qoyaanka iyo heerkulka
• Adkaysi badan meelaha taraafikada culus
In kasta oo gogosha LVT aysan caadi ahaan saameyn ku yeelan isbeddelada qoyaanka iyo heerkulka sida sagxadda alwaax, haddana wali waxay u horseedi kartaa dhibaatooyinka qaar dabaqa. Marka, haddii aad qorsheyneyso inaad ku rakibto meelaha qoyaanka badan, Glue hoos ayaa guud ahaan ikhtiyaarka ugu fiican.
Hore: EIR SPC gogosha vinylalkohol
Xiga: sagxad sagxad ah oo vinylalkohol ah